ရွှေလမင်းနဂါးမှ တင်သွင်းသောAcer Aspire V5 ~ The ICT.com.mm Blog
ရွှေလမင်းနဂါးမှ တင်သွင်းသောAcer Aspire V5
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သေးသေးသွယ်သွယ်နဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Mini Notebookကို Acerမှ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ V5 Aspire Seriesတွေရဲ့ အားသားချက်အတိုင်း ပေါ့ပါးတဲ့အသွင်ကို ခန့်ညားစေပါတယ်။ 3rd Generation Intel Pentium 2129Y (1.1Ghz) CPUနှင့် ပွဲထွက်လာတဲ့ V5-132P (Mini Notebook)က သင့်ရဲ့ဆန္ဒ တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးမှာ ဖြစ်ကာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ 3rd Gen Processorတွေရဲ့ Performanceကို အပြည့်အ၀ အသုံးချခွင့်ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပြီး Window 8လိုင်စင် Version ပါ၀င်ကာ တို့ထိမှုမျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းက အရာရာအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။ Memory 4GB DDR3ကို Next Generation (low Voltage Memory) Series ကိုအသုံးပြု ထားသည့်အတွက် စွမ်းအင် ခွေျတာနိုင်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံစားရမှာပါ။ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ပမာဏ 500 GBပါ၀င်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် ပမာဏကို ရရှိစေပါတယ်။
မျက်နှာပြင် အကျယ် 11.6 လက်မနဲ့ အကြီးကြီးလည်း မကြိုက်၊ သေးသေးလည်း အဆင်မပြေသူတွေအတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေစေမယ့် အရွယ်အစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ LED နောက်ခံအလင်းပေး စနစ်နဲ့ ပုံဖော် ထားကာ Resolution 1366x 768 HDရရှိမှာ ဖြစ်သည့်အတွက်HD ရုပ်ထွက်ကို အပြည့်အ၀ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Networkချိတ်ဆက်မှု အတွက် 802.11b/g/n ပါ၀င်ကာ Bluetooth 4.0ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားမှုက ပြီးပြည့်စုံစေပါတယ်။ လက်(၁၀) ချောင်းထိတွေ့မှု အာရုံခံ မျက်နှာပြင် ဖြစ်သည့်အတွက် ခံစားမှုအရသာသစ်ကို ပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပြီး Doubly Home Theatre Version 4ကို ထည့်သွင်း ပေးထားသည့် အတွက် အသံထွက်စနစ်ကို အကောင်းဆုံး၊ အညက်ညောဆုံး၊ အကြည်လင်ဆုံး ပေးစွမ်းကာ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံငယ်လေး အဖြစ်ဖန်တီးပေး နိုင်ပါတယ်။ Built in Speakers 4လုံး ပါ၀င်ထား တဲ့အတွက် အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ သောတခံစားမှုကို ပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
USB 3.0 ,USB 2.0, VGA port. Cardreaderတို့ နှင့် စုံလင်စွာထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။3Cell Li-ion Batteryနဲ့4နာရီ နီးပါး သုံးစွဲနိုင်မှုက သင့်ကို ကျေနပ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေးသွယ်ပေါ့ပါးပြီး တို့ထိမှု မျက်နှာပြင်နဲ့ အတူ Window 8 လိုင်စင်နဲ့ လန်းချင်သူ တွေအတွက် V5-132P Mini Notebookလေးက သင်နဲ့ အတူရှိနေမှာပါ။ ၀ယ်ယူအားပေးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ရွှေလမင်းနဂါး ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းပြီး မြန်မာတစ်ပြည်လုံးရှိ ကွန်ပျူတာဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူအားပေး နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း- 250177761,250177762သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Acer, Acer Aspire V5, Aspire V5
Newer ထိုင်းဘုရင် သမီးတော် သီရိဒုံရဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေမယ့် ချမ်းချမ်း
Older PES 2014
အစည်းအဝေးခန်းမ၊ စာသင်ခန်းတွေမှာ သုံးလို့အဆင်ပြေနိုင်မယ့် Acer X113PH ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Acer X113PH ဟာဆိုရင်ဖြင့် Resolution 800 x...
ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး၊ လူကြိုက်များတဲ့ Essential Series များထဲမှ Acer Aspire E5-471(i3) Model ဟာဆိုရင် ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး၊ အပြင်အားလုံး...
Acer မှ Monitor များကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနေသော Acer ချစ်သူများအတွက် Acer မှအသစ်ထပ်မံ ထုတ်လုပ်လိုက်သော LED Monitor 20.7 inches အမျိုးအစားဖ...
ရွှေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းရောင်းချသော Acer Smart Phone များကိုဝယ်ယူအားပေးသော Customer များကို ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သောအနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုန...
MSI GS70 2QE Stealth Pro Gaming (17.3”) Slim Notebook
MSI GS70 2QE Stealth ProGaming Notebook ဟာ MSI ၏ အပေါ့ပါးဆုံးနှင့် အပါးအလွှာဆုံး 17.3” Gaming Notebook အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ 4th Gen CPU...
Acer K192 HQLb Monitor
Acer မှ Monitor များကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနေသော Acer ချစ်သူများအတွက် Acer LED Monitor K192HQLb 18.5” inches အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အချိုးအစာ...
ကျော်ကြားလှတဲ့ HP Workstation တွေကို Notebook အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ သင်တောင့်တမိဖူးပါသလား?? သင်တို့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေကို HP မှ အကောင်အထည်...
Acer Smart Phone Liquid Z200
IT လောကတွင်နေရာတစ်ခု ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နာမည်ကျော် Acer Brand မှာ Smart Phone လောကထဲကိုခြေဆန့်လာခဲ့တာ ခရီးအတော်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။...
Mobile, News, Review, Tablets
ယခုတဖန် Acer မှနောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့ Tablet များထဲမှ Android ရဲ့ latest version (Kitkat) ကိုအသုံးပြုထားပြီး 3G Support လုပ်တဲ့အတွက် SIM က...
Acer Aspire E5-471PG (i5)
Notebook ကို Touch screen အမျိုးအစား performance မြှင့်မြှင့် သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Acer Aspire E5-471PG (i5) နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ...
Acer Aspire E5-471G (i5)
Acer မှ Intel နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သော 5th Generation CPU ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Acer Aspire E5-471G (i5) ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ E5-471G...
ကျစ်လစ်လှပသောဒီဇိုင်းပိုင်း နှင့် အရည်အသွေးမြင့် Notebook Series သစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Acer Aspire E5-411 (Pen) ဖြင့် ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်...
3 thoughts on “ရွှေလမင်းနဂါးမှ တင်သွင်းသောAcer Aspire V5”
Achit Sone says:
Nay Linn Aung says:
mercato on-line di prodotti ICT: visita la pagina dei servizi: http://www.ictgest.com/site/